Maro ny raharaha mahakasika fanendahana nisamborana sy nanaovana fanadihadiana azy ireo teo anivon’ny CSP4 Isotry, saingy rehefa avy mifonja izy ireo dia mamerina ny asa ratsiny ihany.
Nampikaikaika ny mponina eny amin’ny faritra Isotry sy 67ha iny no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny CSP4 Isotry sy CSP7 67ha rehefa nokarohina nandritra ny fotoana maharitra. Tamin’ity zoma 18 oktobra teo tamin’ny 7 ora maraina no nahazo vaovao ny polisy mahakasika ny fisiana lehilahy roa mitondra antsy lava mampiahiahy ny mponina teo ambodin’Isotry. Tonga teny an-toerana avy hatrany ny polisy ka vao nahatazana ireto farany izy roalahy dia nandositra nihazo an’ny 67ha.
Tamin’izany no niditra an-tsehatra nanenjika ireo olon-dratsy ihany koa ny polisy avy ao amin’ny CSP7. Vokany, voasambotra izy roalahy, ary mbola tratra teny aminy ilay antsy lava. Mirongatra indray ity fitondrana antsy lava eto andrenivohitra, raha efa nisy fotoana nanaovana fisavana sy namoahana sazy ho an’ireo izay tratra mitondra izany.